NPD Boka rinosimudza Apple semutungamiri mumusika we smartwatch | Ndinobva mac
Haisi chakavanzika chekuti kambani yeCupertino ine bata wakasimba pamusika wewatchwatch pamusoro pemakwikwi. Ichokwadi kuti Apple Watch yakanonoka kusvika, asi zvakadhura kuti ive pakati pevanotengesa zvakanyanya uye iyi yapfuura 2018 kutengesa yasvika 61 muzana ichiisa Apple semutungamiri mumusika we smartwatch.
Zvese izvi maererano ne data rakapihwa neasina kuzivikanwa masosi senge avo veNPD Boka uye ndeyekuti Apple inoramba iri padivi pekupihwa chero yepamutemo dhata pakutengesa kwezvinhu izvi. Kubva pakutanga vakomana vemuCupertino vakatama kubva pakuratidzira zvimiro uye nhasi vanoteera mutsara mumwe chete saka isu tinofanirwa kugadzirisa iyi yekunze dhata kuti tiwane pfungwa yekutengesa kwaApple.
61 muzana kukura mukutengesa
Zvinoenderana ne data rakapihwa na Boka reNPD yuniti yekutengesa kwema smartwatches yakakwira 61 muzana pamusoro pemwedzi gumi nemaviri izvo zvakapera munaNovember 2018 uye izvi zvinoreva kuti 16 muzana yevakuru veAmerica nhasi vane paruoko rwako imwe yemaawa eApple. Inoisa zvekare mashandisiro ekushandisa pakati pemakore gumi nemasere nemakumi matatu nemana sekunge mumwe wevaya vanonyanyoshandisa michina iyi ne18 muzana yemugove.
Kune rimwe divi, kutengesa mumadhora kwakawedzera nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana panguva iyi, zvinoreva kuti Apple imwe neimwe inomira pamusoro pemafemu akaita seSamsung uye Fitbit kuti pamwechete vakawana 88 muzana yekutengesa. Izvo chaizvo hazvidi kuita zvidzidzo zverudzi urwu kuti uone kuti vazhinji uye vashandisi vazhinji vari kushandisa aya Apple akangwara mawachi uye nekuuya kweiyo nyowani Apple Watch Series 4 modhi kukura kwacho kwakatokura. Hukama hweichi chishandiso noutano uye kumba otomatiki nyaya zvinoita izvi kungori kutanga uye nekudaro manhamba anotarisirwa akakwirira nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » NPD Boka rinosimudza Apple semutungamiri mumusika we smartwatch
Podcast 10x19: Musi waMarch 25 tichava neshoko rakakosha
Zvitsva zvinopihwa kubva kuKoogeek kutonga imba yedu nekutarisira hutano hwedu kwenguva yakati rebei